Ndị Uweojii Ejidela Buhari Maka Izu Ohi Ọkà n'Ekiti - Igbo News | News in Igbo Language
Jun 19, 2021 - 15:08
Ndị uweojii na mpaghara Itanla, dị n'Ado-Ekiti steeti nke steeti Ekiti nọrọ na nsonso a wee nwụchie otu nwoke gbara ahọ iri asatọ na isii maka izu ohi ọkà.
Nwoke ahụ aha ya bụ Maazị Buhari Musa bụkwà onye a kpụgharịrị n'ụlọikpe Majie dị n'Ado-Ekiti maka ya bụ ohi ọkà o zuru.
Dịka onye uweojii kpere nwoke ahụ n'aka ụlọikpe, bụ Johnson Okunade siri kọwaa n'ụlọikpe Majie ahụ, Maazị Buhari zuru ohi ọka ahụ n'abalị iri na atọ nke ọnwa Juunu a n'elekere asaa nke ụtụtụ na mpaghara Omisanjana nke Ado-Ekiti.
Okunade, onye ji ọkwa Inspektọ n'ọrụ uweojii gara n'ihu mee ka a mara na ya bụ nwoke gbara ahọ iri asatọ na isii zuru ọka gburu ego ruru puku naịra iri (N10,000) site n'aka Maazị Saliu Mustapha.
O kwuru na ọ bụ n'ugbo nwoke ahụ ka Buhari gara zuo ohi ọka ahụ, ma mee ka a mara na nke ahụ mègidèrè mpaghara 390 nke iwu na-ahụ maka izu ohi na steeti ahụ, bụ nke a maara dịka 'Criminal Law of Ekiti State, 2012'.
Kaosiladị, ọ gwakwazịrị ụlọikpe ka a kàgharịa ya bụ ikpe mgbe ọzọ, ka o wee nwee ike ịkpọta ndị akaebe ya, bụ ndị ga-agbakwa àmà na Buhari zuru ohi ọka ahụ n'ezie.
N'okwu nke ya, onye ọkaiwu na-ekpechitere Buhari ọnụ ya, bụ Lai Obisesan rịọrọ ụlọikpe ka ha tọhapụ ya bụ nwoke, ma kwe nkwà na ọ ga-akpọtakwa ya oge ọzọ a ga-akàgharị ya bụ ikpe.
Na nzaghachi oge ọ nụchara mkpesa na arịrịọ niile ahụ, onye Majie nọ n'isi ikpe ahụ, bụ Ọkaikpe Adedayo Oyebanji, tọhapụzịrị Maazị Buhari ka ọ labagodi, mà kàgharịa ikpe ahụ ka ọ dịzie n'abalị asatọ nke ọnwa Julaị na-abịa abịa. Buhari kwụkwàrà ego dị puku naịra iri abụọ ma kpọtakwa onye mbe binyeere ya aka n'akwụkwọ maka ntọhapụ ya; e wee tọhapụ ya ka ọ laruo ụlọ ma chighata azụ n'abalị asatọ nke ọnwa na-abịa abịa.
Ndị Nna 'Chapel of Redemption' Emeela Ụka Nna 2021 n'Ụdị Pụrụ Iche